Kitaaba Sossobi Seexanaa - Cloud Library
Mana - Kitaabota - Kitaaba Sossobi Seexanaa
Kitaaba Sossobi Seexanaa
Barsiisa: John Bevere
Afaanota hundaan qophaa’aa dha:
Kitaabni Sossobi Seexanaa jedhu kiyyoo Seexanni ilmaan namaa ittin yaada waqayyoo irraa guufachiisuuf ka’ee iccitii isaa ifatti baasaa- Innis gufanna dha. Namoonni hedduun itti qabamniiru, Haata’u malee qabamuu isaan.illee hinbeekan.
Hin gowwummina! Kirstoos illee, ”kan namoota gufachiissaan dhufuun isaan hinhafu” jedheera. (Luk 17;1). Kiyyoon akka dhufu ykn akka ini hindhufne goochuu hindandeessu, garuu yoo kiyyoon siin.dhufe deebii keennuu qophaa’uu qabda. Yoo kiyyoo sanaa karaa siiri itti fayyadamtee hadhaawaa ta’uu irraa irraa barataa itti cimaa Dhuftaa.Qunnamtii waqayyoo wajiin qabdu akka jirutti akka ini itti fufu yoo barbaadee deebii sirrii ta’ee yoo attii gufuu dhufu jiruuf deebiifte duwwaa dha.
Karaa ergaa kanaa John Bevere akka atti yaada waqayyoo keessaa jirachuu dandeessuuf akkasumas shakkii adda addaa irraa akka ati bilisa ba’uu dandeessu sii hubachiisa. Jireenya itti midhaamuu irraa milliqquuf akkasumas ceephoo fi harii dhufuu jiruu irraa bilisa ba’uu dandeessa. Waqayyoof bitaamu haala gariin yerroo hubachuu deemtu jireenyaa dhifama namaaf godhuu danda’u qabata. Innis jireenyaa gamachuu qabuu akka ati jiratuuf sii gargaara.
Buufadhuu (~2.8 MB)
Senaa kee nuuf qoodii